Hagaaji rarka fiidiyowyada YouTube-ka ee Chrome / Chromium / Superbird | Laga soo bilaabo Linux
daekko | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waad salaaman tihiin dhamaan akhristayaasha FromLinux ..
Hagaag tani waa wadashaqeyntii ugu horeysay ee goobtan waxaanan doonayaa inaan ku sameeyo qoraalkan. Mararka qaar markaan daawaneyno fiidiyowyada bogga caanka ah ee YouTube, badanaa waxay dhacdaa in qaabeyntoodu aysan had iyo jeer aheyn tan ugu fiican marka loo eego xawaarahayaga iyo mararka qaarkood, qaabeynta otomaatiga ah ee tayadooda had iyo jeer maahan habka ugu wanaagsan ee lagu sawiro. .
Sida waayo-aragnimadayda, waxaan badanaa u isticmaalaa tayada lagu taliyay ee ku jira YouTube player, laakiin mararka qaarkood tayada ayaa hoos u dhacday xitaa markii ay lahayd baaxad shabakadeed oo ku filan oo lagu soo saaro tayo wanaagsan (360p).
Waxba laguma xallin karo iyadoo la beddelayo dejimaha ... In kasta oo tani mararka qaar dhibsatay (oo ahayd in fiidiyow kasta gacanta lagu dhigo), markaa waxaan go'aansaday inaan ogaado sida loo hagaajiyo ama loo hagaajiyo tayada fiidiyowyada YouTube-ka.
Oo waxaan la kulmay qoraalka soo socda.
Yays. Taas oo ah isticmaale khafiif ah oo aan dhex-dhexaad ahayn oo xakameynaya fiidiyaha fiidiyowga oo hagaajinaya cabbirka ciyaaryahanka la doorbidayo iyo tayada loo maqli karo ee YouTube.
Qoraalkani wuxuu na siinayaa wax ka beddelka soo socda sida ku cad macluumaadka boggiisa:
Tayada: Si otomaatig ah u hagaaji tayada marka fiidiyowgu bilaabmayo
Cabbirka loo maqli karo: Cabbirka ciyaar yahanka asalka ah waa la dejin karaa (Gawaarida, Ballaaran, Habboon)
Xaaladda dib uqabashada bilowga: Bilow, Hakad, Jooji, Hakad otomaatig ah, Joogsi otomaatig ah
Waxay sidoo kale tilmaamaysaa inay isticmaasho YouTube API, waana sababta ay ugu shaqeyneyso dhibaato la'aan.
Ku rakibidda daalacashada ku saleysan Chromium:
Marka hore waxaan tagnaa Chrome Web Store oo waxaan ku darnaa arjiga Tampermonkey.
Taas oo noo oggolaaneysa inaan maamulno qoraallo kala duwan oo aan ugu adeegsanno biraawsarka.
Marka labaad, waxaan tagnaa bogga qoraalka 'Yays' oo waxaan gujineynaa ikhtiyaarka rakibida ee midigta sare, markaa kordhinta Tampermonkey ayaa noo sheegi doonta haddii aan dooneyno inaan rakibno qoraalka, waan aqbalnaa waana intaas.
Hadda waa inaan kaliya ku hagaajino xulashooyinka dib-u-qabashada baahiyahayaga ama dookhyadayada Taas awgeed, Youtube-ka marka aad fiirineyso fiidiyowga aad dooratay qeybta ay na tusayso macluumaadka fiidiyowga, waxay ku tusi doontaa astaan ​​qaab qalab ah, taas oo aan ku hagaajin karno Tayada, Cabirka iyo Xaaladda taranka isku mid.
Markaad karti u yeelatid qoraalkan mar dambe, fiidiyowyada oo dhan waxay ku bilaaban doonaan qaabeynta horay loo doortay.
Taasi waa intaas oo kaliya waxaan rajeynayaa inay waxtar kuu yeelan doonto 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku hagaaji rarka fiidiyowga YouTube-ka ee Chrome / Chromium / Superbird
Su'aal: haddii ay tahay qoraal isticmaale, miyey ka shaqeyn kartaa Firefox iyo Greasemonkey? Salaan.
Ku jawaab filipobe
haa sidoo kale waa lagu rakibi karaa Firefox sidaad wax u faallooto
Ku jawaab daeko
Aad baad u mahadsan tahay, way fiican tahay.
Miyaad siisay dhowr talooyin si aad ugu isticmaasho YT maalmihii la soo dhaafay, mid kasta oo aad kala soo baxdo fiidiyowyo wax ka badan 720p?
Miyaadan tijaabin SMPlayer? Markii la rakibey sidoo kale waxay rakibaysaa (hadda) barnaamij dheeri ah oo kuu oggolaanaya inaad kala soo baxdo fiidiyowyada. Waxaa loo yaqaan 'SMPlayer Youtube Browser'. Waana suurtagal in la doorto xalka fiidiyowga markii aad soo dejineyso.
wanaagsan, isku dayaya 😀
Waa hagaag, mahadsanid qoraalkan waxaan helay Superbird, oo ah baddal bilaash ah (Waxaan arkay dhowr goobood oo sheegaya, inkasta oo aysan ahayn degelladooda, ama aanan arag) Chrome-ka Windows-ka oo ansax ku ah qof walba. Birtu kuma geyneyso Kaydka Websaydhka Chrome, ma laha cusboonaysi otomaatig ah, iyo Chromium ma laha cusboonaysiin otomaatig ah oo lagu dhex dhisay, sidoo kale ma sahlana in la soo dejiyo rakibe.
Waxaan u adeegsanayaa Chromium Windows-ka si sax ah maxaa yeelay cusbooneysiiyaha ayaa hoos u dhigaya waxqabadka qeybta aan ku leeyahay Windows.
On GNU / Linux, Chromium, sida Chrome, si toos ah ayuu uga cusbooneysiiyaa repos.
Waan ka xumahay haddii faalladdii hore aysan jawaab ahaan u imaan, laakiin nooca Opera Mini ayaa i khiyaaneeyey.
Waxaan isticmaalayaa Youtube Center, oo intan ka sii dhammaystiran, wax badanna iga caawisay inaan daawado fiidiyowyada YouTube-ka iyada oo aan waxyeello soo gaadhin.
Aad baad ugu mahadsantahay wax ku biirinta 🙂
Ku jawaab Rhoriro
[Linuxea tu Windows] Laga soo bilaabo Windows - Qaybta I: Hordhac